Suxufiyad Lagu Dilay Dalka Malta Iyo Xiisad Ka Dhalatay Sababta Dilkeeda
(DLN-Malta)-Shacabka dalka Malta ee ka tirsan Midowga Yurub ayaa dhigay banaanbax ay uga soo horjeedan dilka haweenay Suxufiyad ahayd oo la khaarajiyey isniintii lasoo dhaafay.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Daphne Caruana Galizia ayaa gaariyootay kadib markii gaarigeeda bambaano loogu xiray Isniintii gelinkii danbe xili ay ka baxeysay gurigeeda oo ku yaal duleedka magaalada caasimada u ah jasiiradaasi ee Valletta.
Mrs.Galizia ayaa kamid ahayd suxufiyiinta waxbaara oo si weyn uga hadli jiray musuq maasuqa madaxda dowlada Malta xilalka kahaya oo ugu horeeyo Raysalwasaaraha dalkaasi Joseph Muscat oo ay horey warbixino badan uga qortay.
Dowlada Malta ayaa sheegtay in weli uu socdo baaritaanka qaraxa lagu dilay haweenaydan, isla markaana ay kaalmo weydiisteen hay’ada danbi baarista ee FBI-da Maraykanka iyo waliba cilmibaarayaal ka imaan doona dalka Holland.
Qaar kamid ah xisbiyada mucaaridka ee dalkaasi ayaa ugu baaqay Raysalwasaaraha Joseph Muscat inuu xilka iska casilo.